Ithegi: vector kuthelekiswa neraster | Martech Zone
Ithegi: vector kuthelekiswa neraster
NgoLwesithathu, Meyi 17, 2017 NgoLwesithathu, Meyi 17, 2017 Douglas Karr
IVectr yasimahla kwaye inomdla kakhulu kwi-vector graphic app yewebhu kunye nedesktop. IVectr inegophe lokufunda eliphantsi kakhulu elenza uyilo lwegraphic lufikeleleke nakubani na. IVectr izakuhlala isimahla ngonaphakade ngaphandle kwentambo. Nguwuphi umahluko phakathi kweVector kunye neRaster Graphics? Imifanekiso esekwe kumatshini yenziwe ngemigca kunye neendlela zokwenza umfanekiso. Banendawo yokuqala, indawo yokuphela, kunye nemigca phakathi. Banokudala izinto ezi